US Virgin Islands na-ezipụ ozi na World Tourism Day
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » US Virgin Islands na-ezipụ ozi na World Tourism Day
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ Virgin Islands nke US
Beverly-Nicholson-Doty- Kọmishọna-nke-njem njem-US-Virgin-Island
Kọmishọna na-ahụ maka njem nlegharị anya na United States Virgin Islands, Beverly Nicholson-Doty, zigara ozi a n'ụbọchị nke World Tourism Day.
Kọmishọna nke njem na US Virgin Islands, Beverly Nicholson-Doty, zigara ozi a n'oge ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa:
Ka anyị na-echeta Daybọchị Njem Nleta Worldwa, yana United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), anyị na-eme ncheta ihe teknụzụ dijitalụ mere ma nwee ike ime maka njem.
Ihe omuma anyi di na ncheta anyi bu ihe omuma nke afo gara aga mgbe Ala anyi ghaghi iweghachite usoro ahia ya mgbe Hurricanes Irma na Maria mechara.
Omenala na nkwukọrịta yana azụmahịa na ahịa azum enweghị ike ọma izute ihe ịma aka ozugbo na ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe Ọnọdụ nke anyị mgbake. Mgbagha a n'ahịa dị ka anyị si mara ya ghọrọ ohere iji mepụta ahụmịhe dị ike site na iji nyiwe dijitalụ nke oge a.
USVIupdate.com jere ozi dị ka ụzọ ntanetị anyị tupu oké ifufe ahụ, n'oge na mgbe ajọ ifufe ahụ gasịrị. Ugbu a, agbanweela ma na-eje ozi dị ka saịtị na-aga maka mmepe kachasị ọhụrụ na akụ na ụba post-Hurricane. Usoro mgbasa ozi anyị na-elekọta mmadụ rụkwara ọrụ dị ka ebe a na-aza ajụjụ, zaa ajụjụ ọnụ ma ziga ndị na-eso ụzọ anyị ezigbo oge. Ihe nyiwe ndị a nyere anyị ohere ịkọrọ ụwa akụkọ anyị.
Dị ka obere agwaetiti nwere mmefu ego nke njem nleta iji zụọ ebe anyị na-aga, anyị kwesịrị ịga n'ihu na-eme ihe ọhụụ ma na-eme ka teknụzụ dị anyị n'aka. Nke a metụtara ọ bụghị naanị gọọmentị, kamakwa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa, ndị na-enweghị ego maka nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi dijitalụ anaghị akwụ ụgwọ, ikike ya na-enye ohere ọbụlagodi azụmaahịa pere mpe ịsọ mpi na ọkwa ụwa.
Teknụzụ dijitalụ na-eme ka ndị a dị oke mkpa na akụnụba anyị, nwee ọtụtụ ọrụ dabere na ha, iji gosipụta ngwa ahịa ha ozugbo nye ndị ọbịa, ịde ha akwụkwọ n'ịntanetị, ma jikwaa arịrịọ na ajụjụ ha. Ọ na-enye ha ohere ịmatakwu ihe ndị kachasị ọhụrụ na ozi ahịa - yana, n'oge nke afọ, iji soro amụma ihu igwe.
Anyị na-atụ anya ịkekọrịta ihe UNWTO chọtara na ọganihu dijitalụ dị maka ụlọ ọrụ gafere ngalaba gọọmentị anyị, ngalaba nke anyị na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ anyị ka anyị na-amụtakwu nkà anyị ma kwadebe ndị na-eto eto anyị ọrụ na ọrụ na mpaghara a dị mkpa maka ebe anyị na-aga. mpaghara anyi.